Iinqwelomoya zeNew London zisuka eNew York, eDenver, eSan Francisco naseBoston kwi-United Airlines
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya zeNew London zisuka eNew York, eDenver, eSan Francisco naseBoston kwi-United Airlines
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Oktobha 28, 2021
Iinqwelomoya zeNew London zisuka eNew York, eDenver, eSan Francisco naseBoston kwi-United Airlines.
ILondon yayiyeyona ndawo ibhukishwe kumazwe ngamazwe kubathengi beshishini baseUnited ngo-Okthobha, kwaye inqwelomoya ilindele ukuba le ndlela iqhubeke ukuya kutsho ngo-2022.
I-United Airlines ibhengeza iinqwelomoya ezintlanu ezintsha ukusuka kwizixeko ezine zase-US ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseLondon Heathrow.
I-United Airlines inikezela ngeenqwelomoya ezingama-22 ngosuku ukuya eLondon, eUnited Kingdom ngeNtwasahlobo yowama-2022.
Nje ukuba inkonzo iqale, i-United iya kubonelela ngeenqwelomoya ezininzi phakathi kweSixeko saseNew York kunye neLondon kunayo nayiphi na enye inkampani yase-US.
United Airlines namhlanje ibhengeze ukuba yongeza iinqwelomoya ezintlanu ezintsha eLondon Isikhululo senqwelomoya saseHeathrow, kubandakanywa iinqwelomoya ezimbini ezingakumbi ukusuka eNew York / eNewark, uhambo olongezelelweyo oluvela eDenver naseSan Francisco, kunye nenqwelomoya entsha esuka eBoston. Inkonzo entsha iqala ngoMatshi ka-2022 kwaye ngezi zongezo, i-United iya kuba kuphela kwenkampani yase-US enikezela ngenkonzo engayekiyo phakathi kweemarike zamashishini ezisixhenxe zelizwe kunye neLondon. I-United iya kubonelela ngeenqwelomoya ezingama-22 ngosuku ukusuka e-US ukuya eLondon, kunye neenqwelomoya ezininzi phakathi kweSixeko saseNew York neLondon kunaye nawuphi na omnye umthwali wase-US. ILondon yayiyeyona ndawo ibhukishwe kumazwe ngamazwe kubathengi beshishini baseUnited ngo-Okthobha, kwaye inqwelomoya ilindele ukuba le ndlela iqhubeke ukuya kutsho ngo-2022.
"Phantse iminyaka engama-30, i-United ibonelele ngonxibelelwano olubalulekileyo phakathi kwe-US neLondon, ukugcina inkonzo kulo lonke ubhubhane kunye nokukhulisa ishedyuli yethu ngokucokisekileyo ukugcina abathengi bethu kula maziko abalulekileyo oshishino lwehlabathi enxibelelene," utshilo uPatrick Quayle, usekela mongameli welizwe jikelele. inethiwekhi kunye nemifelandawonye kwi United Airlines. "ILondon yinxalenye yothungelwano lwe-United kwaye sihlala siqinisekile ukuba imfuno iya kuqhubeka ikhula, ngakumbi njengoko uhambo lwamazwe ngamazwe lubuya ngo-2022."
Ezi nqwelomoya zintsha zakha kweyona inkulu yaseUnited-nanini na-Ukwandiswa kweAtlantiki ibhengezwe ekuqaleni kwale nyanga. Ngoku iUnited isebenza iinqwelomoya ezisixhenxe ukuya Heathrow ukusuka e-US: iinqwelomoya ezimbini zemihla ngemihla ukusuka eNew York / eNewark naseWashington DC, kunye nenqwelomoya enye yemihla ngemihla esuka eChicago, eHouston, naseSan Francisco. NgoDisemba, inkonzo iya kunyuka ukuya kwi-10 yeenqwelomoya zemihla ngemihla, kunye neenqwelomoya ezongezelelweyo ezivela eNew York / eNewark naseChicago, kanye ngexesha leeholide zasebusika.
Iinqwelomoya ezintlanu ezintsha ziya kwenza ukutsiba-tsiba echibini kube lula kwaye kukhululeke ngakumbi kulonwabo nabahambi beshishini, njengoko United Airlines uya kuthi:
Qalisa ezintsha kraca, iinqwelomoya zemihla ngemihla ezisuka eBoston ezisebenza nge-United's premium Boeing 767300ER, enezihlalo ezingama-46 zeshishini le-United Polaris kunye nezihlalo ezingama-22 ze-United Premium Plus® zeprimiyamu yoqoqosho.
Qalisa kwakhona iinqwelomoya zemihla ngemihla ukusuka eDenver kwaye wongeze inqwelomoya yesibini yemihla ngemihla eqhutywa yiBoeing 787-9.
Yongeza inqwelomoya yesithandathu neyesixhenxe yemihla ngemihla ukusuka eNew York/Newark, nganye kuzo iya kuqhutywa yi-United's premium Boeing 767-300ER kwaye uvumele inkonzo yeyure ngokuhlwa.
Yongeza inqwelomoya yesithathu yemihla ngemihla esuka eSan Francisco eqhutywa yiBoeing 787-9.
Qalisa kwakhona inkonzo yemihla ngemihla ukuya eLondon ukusuka eLos Angeles.